Madaxweyne Xasan Sheekh iyo John Kerry oo ku kulmay Itoobiya. – idalenews.com
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo John Kerry oo ku kulmay Itoobiya.
Sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegey in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday xukumada Washington arrimo ay ka mid yihiin dhismaha ciidamada qalabka sida ee Somalia, kobcinta dhaqaalaha iyo dib u habaynta hay’adaha dowladda Somalia kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno katirsan golaha wasiirada.
War murtiyeedkan ka soo baxay wasaraad arimaha dibada eemareykanka ayaa lagu sheegey in madaxweynaha Somalia uu ka faalooday marxaladihii dalka uu soo maray labaatankiis ano ee la soo dhaafay ayna ku began tahay 25 sno guuradii ka soo wareegatay burburkii doqwladii dhexe dadka somaliyeedna ay u baahanyihiin nidaam dowlada nimo isagoona cdsaday in laga kaabo sidii dalka loo gaar siin lahaa doorasho xor ahi.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in dowladdu ay horumarro ka sameysay arrimaha ammaanka ayadoo kaashaneysa ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika. Xoghaye Karry ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka dhaceen is-bedello iyo horumar dhabbaha u xaaraya in waddanku uu ka soo kabsado dhibaatada muddada dheer ka jirtay.
Dhageyso: Suldaan Sheegay In Axmed Madoobe Uu Dadkiisa Ka Xaaqay Magaalada Kismaayo.
Daawo: Barnaamij laga sameyey Dilkii Gabadha Ardeyadda aheyd ee ay AL-shabaab dileen.